Exchange rates, izingcaphuno
Currency exchange rate umlando
Historical exchange kuwona wonke zezimali emhlabeni kusukela ngo-1992 kuze kube namuhla. Ukushintshwa kwemali amashadi unyaka, inyanga ngayinye futhi engu-20 edlule.
Izilinganiso zokushintsha zangaphandle
Afghani Afghan Angolan Kwanza entsha
Ariary Malagasy Aussie dollar
Bahrain dinar Baht Thai
Balboa Panamanian Bangladesh Taka
Barbados dollar BaseChile Unidad de Fomento
Bhutan Ngultrum Boliviano saseBolivia
Bosnia and Herzegovina uphawu convertible Botswana Pula
Brazilian real Brunei dollar
Cape Verde Escudo Cayman Islands dollar
Cordoba baseNicaragua Costa Rica colon
Cyprus ganda Denar Macedonian
Deutsche mark Dinar Algeria
Dinar Kuwaiti Dinar Serbian
Dinar Tunisian Dinar waseLibya
Dirham Moroccan Djibouti franc
Dollar Bahamian Dollar Canadian
Dollar East Caribbean Dollar Jamaican
Dollar Namibian Dollar Zimbabwean
Dollar entsha Taiwan Dominican peso
Escudo Portuguese Ethiopian Birr
Euro Falkland Islands ganda
Fiji dollar Florin UmAruba
Forint Hungarian Franc Belgian
Franc Comoran Franc Congolese
Franc Swiss Franc baseRwanda
France frank French Pacific franc
Gambian dalasi Ganda Egyptian
Ganda Irish Ganda Lebanese
Ganda South Sudanese Ganda Sudanese
Ganda Syrian Ghana Cedi
Gibraltar ganda Gourde Haitian
Guarani Guernsey ganda
Guinea franc Gulden Antilliaanse
Guyana dollar Hondura Lempira
Hong Kong dollar Hryvnia
I-Troy ounce yesiliva IZimbabwe dollar
Iceland krone Igolide elilodwa le-Troy / igolide electronic)
Ikholoni El Salvador Iraqi Dinar
Israeli yeshekeli entsha Jersey ganda
Kenya usheleni Kina
Koruna Czech Krona Swedish
Krone Norwegian Kroon Estonian
Kuna Croatian Kwanza
Kyat Burmese Lao Kip
Lari Georgian Latvian lat
Lek Albanian Leone
Leu Romanian Leu baseMoldova
Lev Bulgarian Liberia dollar
Lilangeni Lira Maltese
Lire Italian Litas Lithuanian
Lwesiliva Greek Malawi Kwacha
Malaysin Ringgit Manat Azerbaijani
Manx ganda Mauritius Rupee
Metical waseMozambique Naira Nigerian
Nakfa NaseSurinam Guilder
NaseSurinam dollar Netherlands Guilder
New Turkish lira New Zealand dollar
North Won Korean Okokuphrinta
Ouguiya Mauritanian Pa`anga
Pakistan Rupee Pataca Macanese
Peruvian Nuevo Sol Peseta Spanish
Peso Argentine Peso Chilean
Peso Colombian Peso Cuban
Peso Mexican Peso Uruguay
Philippines peso Quetzal laseGuatemala
Rand Rial Iranian
Rial Omani Rial Yemeni
Riel Cambodian Riyal Qatari
Riyal Saudi Ruble Belarusian
Ruble Russian Rufiyana Maldivian
Rupee Indian Rupee Nepalese
SDR (Special drawing amalungelo) Saint Helena ganda
Slovak koruna Solomon Islands dollar
Sri Lanka Rupee São Tomé and Príncipe Dobra
Tala Tolar Slovenian
Trinidad and Tobago dollar Tugrik-Mongolian
Turkmenistan manat Turkmenistan manat entsha
UAE Dirham URupiah Indonesian
US dollar Uganda usheleni
Umqhele Danish Uphawu Fin
Usheleni Austrian Usheleni Tanzanian
Usheleni waseSomali Uzbekistan sum
WaseVenezuela Bolivar fuerte Won South Korean
Yugoslavian dinar entsha Zambian Kwacha
Ukuze phezulu ohlwini of exchange rate
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2021.
Rand nezilinganiso ze 2021 ngosuku ngalunye. Rand nezilinganiso ze 2021 ngosuku ngalunye. Umlando wesilinganiso sokushintshwa kwanoma iyiphi imali yezwe ye- 2021 nsuku zonke.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2020.
Database lomlando wesilinganiso sokushintshana. Database lomlando wesilinganiso sokushintshana. Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 2020 ngosuku ngalunye.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso ze- 2019.
Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 2019 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 2019 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Izinga lokushintshaniswa noma izingcaphuno zezimali zomhlaba 2019 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku.
Umlando wezingcaphuno namanani wokushintshaniswa ku- 2018.
Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2018. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2018. Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2018.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso ze- 2017.
Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye. Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye. Isilinganiso sokushintshaniswa kwansuku zonke (isilinganiso) sezimali zomhlaba wonke ze- 2017.
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2016.
Rand nezilinganiso ze 2016 ngosuku ngalunye. Rand nezilinganiso ze 2016 ngosuku ngalunye. Izinga lokushintshaniswa noma izingcaphuno zezimali zomhlaba 2016 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2015.
Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 2015 ngosuku ngalunye. Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 2015 ngosuku ngalunye. Sigcina umlando wazo zonke zezimali zamamayela ngosuku ngalunye.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2014.
Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2014. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2014. Umlando wesilinganiso sokushintshwa kwanoma iyiphi imali yezwe ye- 2014 nsuku zonke.
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2013.
Umlando wamanani wokushintshana wazo zonke imali kubo bonke. Umlando wamanani wokushintshana wazo zonke imali kubo bonke. Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2013.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso ze- 2012.
Umlando wamanani wokushintshana wazo zonke imali kubo bonke. Umlando wamanani wokushintshana wazo zonke imali kubo bonke. Umlando wesilinganiso sokushintshwa kwanoma iyiphi imali yezwe ye- 2012 nsuku zonke.
Umlando wezingcaphuno namanani wokushintshaniswa ku- 2011.
Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2011. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2011. Database lomlando wesilinganiso sokushintshana.
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2010.
Rand losuku olufanele lwe 2010. Rand losuku olufanele lwe 2010. Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2009.
Izinga lokushintshaniswa noma izingcaphuno zezimali zomhlaba 2009 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Izinga lokushintshaniswa noma izingcaphuno zezimali zomhlaba 2009 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2008.
Rand nezilinganiso ze 2008 ngosuku ngalunye. Rand nezilinganiso ze 2008 ngosuku ngalunye. Database lomlando wesilinganiso sokushintshana.
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 2007.
Lapha ungathola isilinganiso sanoma yiluphi uhlobo lwemali nganoma yiluphi usuku. Lapha ungathola isilinganiso sanoma yiluphi uhlobo lwemali nganoma yiluphi usuku. Umlando wezingcaphuno ze- Rand nsuku zonke ze- 2007.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso zezimali zomhlaba zomhlaba ze- 2006.
Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2006. Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2006. Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 2006 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso zezimali zomhlaba zomhlaba ze- 2005.
Umlando wezingcaphuno ze- Rand nsuku zonke ze- 2005. Umlando wezingcaphuno ze- Rand nsuku zonke ze- 2005. Database lomlando wesilinganiso sokushintshana.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2004.
Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2004. Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2004. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 2004.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso ze- 2003.
Izinga lokushintshana losuku olufanele lwe 2003. Izinga lokushintshana losuku olufanele lwe 2003. Lapha ungathola isilinganiso sanoma yiluphi uhlobo lwemali nganoma yiluphi usuku.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 2002.
Rand nezilinganiso ze 2002 ngosuku ngalunye. Rand nezilinganiso ze 2002 ngosuku ngalunye. Umlando wezingcaphuno zemali zosuku ngalunye lwe 2002.
Umlando wamanani wokushintshaniswa nezilinganiso zezimali ze- 2001.
Izinga lokushintshana losuku olufanele lwe 2001. Izinga lokushintshana losuku olufanele lwe 2001. Umlando wamanani wokushintshana wazo zonke imali kubo bonke.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso ze- 2000.
Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye. Umlando ophelele wezingcaphuno zohlobo lwemali nsuku zonke zonyaka ngamunye. Umlando wezingcaphuno ze- Rand nsuku zonke ze- 2000.
Izilinganiso namanani wokushintshaniswa kwezimali zezwe zomhlaba we- 1999.
Rand losuku olufanele lwe 1999. Rand losuku olufanele lwe 1999. Izinga lokushintshaniswa noma izingcaphuno zezimali zomhlaba 1999 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 1998.
Lapha ungathola isilinganiso sanoma yiluphi uhlobo lwemali nganoma yiluphi usuku. Lapha ungathola isilinganiso sanoma yiluphi uhlobo lwemali nganoma yiluphi usuku. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 1998.
Umlando wamanani wokushintshaniswa nezilinganiso zezimali ze- 1997.
Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 1997 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 1997 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Sigcina umlando wazo zonke zezimali zamamayela ngosuku ngalunye.
Izinga lokushintshaniswa nezilinganiso zezimali zomhlaba zomhlaba ze- 1996.
Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 1996 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Izinga lokushintshana noma izingcaphuno ze Rand ye 1996 enyangeni ngayinye nakuzo zonke izinsuku. Sigcina umlando wazo zonke zezimali zamamayela ngosuku ngalunye.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 1995.
Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 1995. Nsuku zonke Rand isilinganiso sokushintshaniswa (isilinganiso) se 1995. Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 1995 ngosuku ngalunye.
Izinga lokushintshwa kwemali, izingcaphuno zohlobo lwemali lomhlaba 1994.
Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 1994 ngosuku ngalunye. Izinga lokushintshanisa nezilinganiso ze 1994 ngosuku ngalunye. Database lomlando wesilinganiso sokushintshana.